မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း: ဦးမိုးသီးဇွန် မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် ပြန်လျှောက်မည်
Home » Myanmar New » ဦးမိုးသီးဇွန် မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် ပြန်လျှောက်မည်
ဦးမိုးသီးဇွန် မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် ပြန်လျှောက်မည်
လူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တွင်တရားဝင် ပါတီဝင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဦးမိုးသီးဇွန် သည် မြန်မာနိုင်ငံ သားအဖြစ် ပြန်လျှောက်ထား ကြောင်း ပါတီတည်ထောင်ခဲ့သူ ဦးမိုးသီးဇွန်က ရန်ကုန်တိုင်းမ် သတင်းစာသို့ ပြော သည်။
လူ့ဘောင်သစ်ပါတီကို အောက်တိုဘာလအတွင်းက တရားဝင်နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ဆောင်ရွက်နေချိန် တွင် ဦးမိုးသီးဇွန်က ပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပါတီမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါက အမေရိ ကန်နိုင်ငံသား အဖြစ် ခံယူထား သည်ကို စွန့်လွှတ်ကာပါတီအလုပ် များကို ဆက်လက်လုပ် ကိုင်မည် ဟု လည်း ယင်းက ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောသည်။
ဦးမိုးသီးဇွန်က''ကျွန်တော် အခု မြန်မာနိုင်ငံသားပြန် လျှောက်နေပါပြီ။ ရပြီဆိုရင် အ ချိန်ပြည့်ပါတီဝင်အနေနဲ့ လုပ် နိုင်မယ်။ လောလောဆယ်ပါတီ အကြံပေးအဖြစ် လုပ်နေပါတယ်။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ကျပြီဆိုတာနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားကို စွန့်လွှတ် ပြီး ဒီနိုင်ငံသားခံပြီး ပါတီအလုပ် တွေ ဆက်လုပ်မယ်။ ကျွန်တော် ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတာ အထောက်အ ထားတွေ အခုထိရှိပါသေးတယ်'' ဟုပြောသည်။
လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးဇော် က ''ကျွန်တော်တို့ မကြာခင် ပါတီညီလာခံပြန်လုပ်ပါမယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကျရင် ကိုမိုးသီးပြန် ပါမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အရင် ဆုံးမှတ်ပုံတင်ပြီး တရားဝင်ပါတီ အဖြစ်ရပ်တည်ဖို့လိုတယ်။ နောက် ပြီးပါတီတည်ဆောက်ရေးလုပ် ငန်းတွေလဲ လုပ်ရဦးမယ်''ဟု ပါတီ တွင် ဦးမိုးသီးဇွန်ပြန်လည်ပါဝင် လာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန် တိုင်းမ်သတင်းစာ၏မေးမြန်းမှု ကိုပြောသည်။
ဦးမိုးသီးဇွန်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂအတွင်း ရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေ ရာမှ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက် တစ် ပါတီကို ၁၉၈၈ခုနှစ်အောက်တို ဘာ ၁၄ရက်တွင် ဦးဆောင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရားဝင်နိုင် ငံရေးပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ သည်။
ယင်းနောက်ပါတီအဖြစ် သုံးနှစ်သာ ရပ်တည်ခဲ့ရပြီး စစ် အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီအင်အား စုများကို နှိပ်ကွပ်ခဲ့စဉ် ၁၉၉၁ခု နှစ်တွင် ပါတီမှာလည်း ထိုင်းနိုင် ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေစိုက်ရပ်တည် ခဲ့ကာ ယင်းကိုယ်တိုင်မှာလည်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား များဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(ABSDF)) သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမှတစ်ဆင့် အမေရိကန် နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယင်းနိုင်ငံ သားအဖြစ်ခံ ယူကာ အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ပြည်တွင်းသို့ပြန် လာ၍ ဒီမိုကရေစီအင် အားစု များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြု လုပ်ပြီး ယခုအခါ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မှတ်ပုံပြန်တင်ရန်ကြိုးစားချိန်တွင် အမြဲ တမ်းပါတီဝင် အဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင် ရန် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ပြန် လည်လျှောက်ထားရန် စီစဉ်ထား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
: Myanmar New
2 Comment Box:
Zaw Mmtun said...
တို့နိုင်​ငံအတွက်​ ဘာ​ကောင်းကျိုးမှ မ​ပေးဘူး
​စိတ်​ဓာတ်​က​မျောက်​စိတ်​ လူက ​မျောက်​ရုပ်​
မိုးသီးရာ မင်းပြန်မလာရလို့ ငါတို့ ဒီမိုကရေစီမရတော့ဘူး ဆိုရင်လည်း ငါတို့ထိုက်နဲ့ ငါတို့ကံသာ ရှိပါစေတော့။ မင်းကိုတော့ မြန်မာ့မြေမှာ ခြေချခွင့်တောင် မပေးပါရစေနဲ့တော့။
ခွေးစိတ်ဝင်နေတဲ့ တရုတ်လူအိုကြီး နှင့် ရထားပေါ်မှ နေရာလုရန်ပွဲ (video)
တရုတ်ပြည်မှာ မြေအောက်ရထားထိုင်ခုံ နေရာရဖို့အတွက် အသက်(၆၀) အရွယ်ရှိအဖိုးကြီးတစ်ဦးကအသက်(၂ ၈)အရွယ် ကျောင်းဆရာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အရှင်လတ်လတ...
သာကေတ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ထောင်သုံးနှစ်ချ
2.2.2013 ရက်စွဲနှင့်တင်ခဲ့တဲ့ “ပူပူနွေးနွေး မုဒိမ်းမှုလေးပါ” သာကေတ အမှတ်(၂)ရဲစခန်း ပ/၉၂။ သတင်းထဲက မုဒိမ်းကောင် ဖာသွတ်(ခ)ခင်ထွန်းကို ၃၇၆ ပ...
စက်ရုံ၊လုပ်ငန်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် နိုင်ငံတော်အတွက် များ စွာနစ်နာခဲ့...
Myanmar Popular Singer & Actor Thazin: Caught on Tape ??!!!(video file)
=============================== ကာမ ဆက်ဆံ နေစဉ် အတွင်း လျှို့ ဝှက် ကင်မရာ ဖြစ် မှတ်တမ်း တင် ခံ ရ ပြီး နောက် လူသိ များ သွား သည့် ဗီဒ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံးစိုက်မည် မဟုတ်ဟု နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဌာနဆို
နိုင်ငံများ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော OIC (Origanization of The Islamic Cooperation) က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုံးစိုက်မည်ဟု သတင်းများ ထွက်...
နားလည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး နှင့် အချစ်က ထမင်းစားလို့မရဘူး ဆိုတဲ့ သဇင် စီးရီးသစ်ထွက်ရန်ပြင်ဆင်
အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးနောက် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ သိပ်မတွေ့ရတော့တဲ့ သဇင်က လက်ရှိအချိန်မှာ သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် သီချင်းခွေ အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ...
ဗေဒင် သွားမေးမိရာက အစော်ကား ခံလိုက်ရတဲ့ ကာယကံရှင် မိန်းကလေးရဲ့ စာ
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နာရီလောက်ကပဲ ကျွန်တော့်ဆီကို ဓာတ်ချောစာ တစ်စောင် ၀င်လာပါတယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ ခံစားမှု ပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်။ ကရုဏာလည်း သက်ရတယ်၊ ...
မြန်မာအယူအဆအရ သားသမီးရတနာဟု မည်သို့ပင်ဆိုလင့်ကစား သန္ဓေသားရယူလိုသူများအတွက် ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်းသည် မင်္ဂလာသတင်း ၊ ဝမ်းသာစရာအဖြစ် ဆိုပေမယ့် က...
Myanmar Express Website သဘောထားပြောင်းလဲသွားပြီလား
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အတိုက်အခံအဖွဲ့များ၏ အကြောင်းများ အား ပြင်းထန် စွာ ဝေဖန်ရေးသားလျက်ရှိသော Myanmar Express...
Sexy Model အဖြစ် နှင့် သာ ရပ်တည် သွား မည် ဟု ဖွင့်ဟ လာ သည့် မော်ဒယ် ဇာဇာထက်
Sexy Model အဖြစ် နှင့် သာ ရပ်တည် သွား မည် ဟု ဖွင့်ဟ လာ သည့် မော်ဒယ် ဇာဇာထက် က Sexy Post များဖြင့် နိုင်ငံ တကာ ပရော် ဖက်ရှင် နယ် မော်ဒယ်...
Copyright 2010 မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း